नेपालगन्जको पर्यटन, कैलाशपति महादेवको वरदान – Satyapati
नेपालगन्जको पर्यटन, कैलाशपति महादेवको वरदान
काशीराम शर्मा । ११ मंसिर २०७४, सोमबार
कृष्ण अधिकारी/बाँके । यहाँ हामी यस्तो कथा लेख्न गइरहेका छौं जसमा एउटा ठाउँको भाग्य चम्किएको छ । हो, मानिसको जसरी नै कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि बेला भाग्योदय हुन सक्छ, भाग्य चम्कन सक्छ । त्यसरी भाग्य चम्किएको ठाउँ हो, नेपालगन्ज । नेपालगन्जको भाग्यको तार अनायसै कैलाश मानसरोवरसँग जोडिन पुग्यो । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको ओइरो लाग्न थालेको छ, धमाधम ठूला होटलहरु बनिरहेका छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित अनेक व्यवसाय चम्किएका छन् । लाग्छ, नेपालगन्ज माथि कैलाशपति महादेवको वरदान वर्षिएको छ । नेपालगन्जको भाग्य चम्किनुको अर्काे कारण हो, मुगुको राराताल । यो ताल हेर्न जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको प्रवेशद्धार पनि नेपालगञ्ज नै हो ।
हुनत नेपालगन्ज अतितदेखि नै पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो सहर, वाणिज्य तथा प्रशासनिक केन्द्र रहँदै आएको छ । द्धन्दकालमा पश्चिम पहाडी क्षेत्र अशान्त बनेपछि नेपालगञ्ज तथा आसपासमा ठूलो संख्यामा मानिस ओइरिए । पश्चिम नेपालमा शान्तिको प्रयास गर्ने अनेक संघसंस्थाले नेपालगञ्जलाई मुकाम बनाए । द्धन्दकालपछि नेपालगन्जको भाग्य अलि सुस्त भएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अवस्था फेरिनुको मुख्य कारण हो कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय यात्रुहरुको रुट नेपालगन्ज बन्न थाल्नु । यहाँ भारतीय पर्यटकहरुको ओइरो लाग्न थालेको छ । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तिर्थालुहरुको मुख्य रुटका रुपमा नेपालगन्जको भाग्य चम्कन थालेको हो । भारतीय तिर्थालुहरु विमानबाट काठमाडौं हुँदै नेपालगन्ज आइपुग्छन् । स्थलमार्गबाट आउनेहरु रुपैडिया नाकाबाट नेपालगन्ज छिर्छन् । नेपालगन्जबाट यी तिर्थयात्रीहरु हुम्ला हुँदै मानसरोवर पुग्छन् ।
कैलाश मानसरोवर हिन्दू, वौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बीका लागि पवित्र तिर्थस्थल हो । चीनमा पर्ने मानसरोवर पुग्न भारतबाटै पनि मार्ग नभएको होइन तर नेपालबाट जति सुरक्षित छैन । बेलाबखत हुने भारत र चीनको द्धन्दका कारण मानसरोवर जाने यात्री समस्यामा पर्छन् । त्यसैले भारतीय तिर्थालुहरुको रुट नेपाल हो र नेपालको पनि नेपालगन्ज हो । नेपालगन्जबाट हुम्लाको सिमिकोट हुँदै मानसरोवर जान सकिन्छ । पछिल्लो कालमा नेपालमा छाएको शान्तिले पनि भारतीय तिर्थालुहरुको मानसरोवर जाने रुट नेपालगन्ज बनेको हो । शान्तिले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने उक्ति यथार्थमा परिणत भएको महशुस नेपालगन्जवासीले गर्न थालेका छन् । नेपालगन्जलाई भारतीय तिर्थालुहरुले चुन्नुको अर्काे कारण हो भारतको दिल्ली र लखनउ हुँदै नेपालगन्ज पुग्ने सडक ६ लेनको बन्नु । भव्य सडक बनेपछि नेपालगन्जमा पर्यटक सँगै आर्थिक गतिविधिले पनि तिब्रता पाउन थालेको छ ।
भरिभराउ विमान, खचाखच होटल
मानसरोवर र रारा जाने पर्यटकको संख्या बढेसँगै नेपालगन्जमा होटल सहित अन्य पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको बताउँछन् होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) नेपालगन्ज च्याप्टरका महासचिव सरोजकुमार चन्द । बैशाखदेखि असोजसम्म काठमान्डौ नेपालगन्ज हवाई उडानको संख्या दोब्बर हुने गरेको छ । नेपालगन्जबाट हुम्लाको सिमीकोटका लागि दैनिक १६ वटा सम्म उडान हुने गरेको छ । बुद्ध र यति एयरले वर्षाैदेखि काठमाण्डौं नेपालगन्ज रुटमा उडान गर्दै आएका छन् । यो बर्षबाट सौर्य र श्री एयरले पनि काठमान्डौंबाट नियमित उडान थालेका छन् । पर्यटक आउँदाको स्वाद नेपालगन्जसँगै हुम्लाले पनि लिइरहेको छ । सिमिकोट गाउँपालिकाले मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकबाट प्रति व्यक्ति एक हजार एक सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिइरहेको छ । यो रकम सिमिकोटले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको छ ।
पर्यटक ओइरिँदै, होटल थपिँदै
कैलाश मानसरोवरलाई गन्तव्य बनाएर नेपालगन्ज आइपुग्ने भारतीय पर्यटक निकै स्तरीय छन् । स्तरीयको अर्थ हो खर्च गर्ने क्षमता भएका पर्यटक । यस्ता पर्यटकले तारे होटल खोज्छन् । यिनै भारतीय पाहुनाहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालगन्जमा धमाधम तारे होटलहरु थपिँदै छन् । पछिल्लो तीन बर्षमा सिटी प्यालेस, सिग्नेट कृष्णा, कलपत्रु जस्ता ठूला र सुविधा सम्पन्न होटल सहित करिब एक दर्जन साना होटल थपिएका छन् । नेपालगन्जका चर्चित होटलहरु सिद्धार्थ र स्नेहाले कोठा संख्या दोब्बर बनाएका छन । सोल्टी गु्रपले पनि सुविधा सम्पन्न होटल संचालनको तयारी गर्दैछ । नेपालगन्जसँगै जोडिएको सहर कोहलपुरमा पनि करिब ४० करोड रुपैयाँको लागतमा ८८ कोठाको सेन्टर प्लाजा होटल संचालन भएको छ । पर्यटक बढेपछि होटल व्यवसायीहरु पनि उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले क्षमता मात्रै नभएर गुणस्तर पनि बढाएका छन् । नेपालगन्जका होटलहरुले दैनिक एक हजार पर्यटकहरुलाई स्तरीय आतिथ्य दिनसक्छन् ।
कति आए ?
गत बर्ष करिब नौ हजार भारतीय पर्यटक नेपालगन्जबाट हुम्लाको सिमिकोट हुँदै कैलाश मानसरोवर गएका थिए । यो वर्ष करिब १३ हजार पर्यटकले कैलाश मानसरोवरको दर्शन गरेका छन् । यी मध्ये करिब सात हजार पर्यटक काठमाडौंबाट हवाईमार्ग हुँदै नेपालगन्ज आएका थिए । बाँकी यात्रु लखनउ रुपैडिया हुँदै आएका थिए । कैलाश मानसरोवर जाने करिब ६ हजार पर्यटकलाई सिद्धार्थ होटलले आतिथ्यता प्रदान गरेको होटलका प्रवन्धक केशव न्यौपाने जानकारी दिए । मानसरोवर जाने अधिकांश पर्यटक भारतको कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रका हुने गरेका छन् । नेपालमा शान्तिपूर्ण अवस्था कायम राख्न सकियो र पर्यटकीय पूर्वाधारहरु विकास गर्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास अझ तिब्र गतिमा हुनसक्ने सम्भावना नेपालगञ्जको उदाहरणबाट पनि देख्न सकिन्छ । विगतमा पश्चिमी मुलुकका पर्यटकहरुले मात्र समृद्धि ल्याइदिन्छन् भन्ने धारणा थियो, अहिले आएर के सिद्ध हुँदैछ भने भारतीय पर्यटकबाट पनि नेपालले मनग्ये फाइदा लिन सक्छ । आगामी दिनमा अझ धेरै संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्राउने आशामा छ नेपालगन्ज । यो आशा यथार्थमा परिणत होस्, नेपालगन्जलाई हार्दिक शुभकामना ।
विकासले फेरिँदै जानकीका ‘ग्रामीण बस्ती’
प्रदेश नं. ५ मा कृषिमा अनुदानै अनुदान
नेपालले थेग्न सक्ने बाघको संख्याबारे अध्ययन हुँदै
भेरी बबई डाइभर्सनको अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘छोटो समयमा उत्साहजनक काम’
उर्जामन्त्रीलाई फोन गर्दै टीकापुरबाट कमलाले भनिन्, ‘मन्त्री ज्यू, बिजुली बाल्न पाएनौँ’
सामुदायीक होमस्टेले फेरिएको गुमनाम गाभर, स्वरोजगार बन्दै युवा